Ihe Eji Eme Ụlọ Oriri
Ihe Eji Eme Ụlọ Oriri N’inwe ike mmụọ site na nri dị ụtọ nke ọdịnala ndị Tainan (obodo ochie na Taiwan juputara na ihe ọdịnala), site na ime ka ha bụrụ ihe ndozi ụlọ oriri na ọ ,ụ fesụ, usoro nri a na-eri oriri amara mgbe niile dị ka obodo & & quot; Marn & quot ;, pụtara mmezu na omenala China; achicha osikapa eji edozi aru dika nke eji aka na ncha, nri achicha bea, dika achicha mposi, tang yuan di nma dika ude aka na ahihia achara; Tainan brown bun bun ka tea set. Ihe nketa omenala Tainan nwere ike buru ụwa ebe niile maka ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ bụ ebe dị mma iji kwalite ọdịbendị obodo.
Oche Achara Tozuru Oke
Satọdee 20 Febrụwarị 2021
Oche Achara Tozuru Oke Kala, stool mere na lachara laminated na a retractable usoro na etiti axis. Inweta ihe mkpuchi nke akwụkwọ mmanụ dị ka mmụọ nsọ ya, a na-eji okpomoku a gbanyere ọkụ ma dochie ngwakọta osisi ahụ nke gbanwere n'ụdị, na-egosi ịdị mfe ya na ịma mma nke ebe ọwụwa. N’ezie ihe ijuanya nke ike achara achara nke emebere na usoro a na-ejigharị azụ n’etiti ya, mmadụ ga-enwe mkparịta ụka ma ọ bụrụ na ọ na-anọdụ n’elu oche ya, ọ ga-agbadata n ’ọfụma, ma mgbe mmadụ biliri n’ọnụ Kala, ọ ga-alaghachi n’ọnọdụ ya. .
Egwuregwu Iku Ume
Egwuregwu Iku Ume Bụ ihe eji egwuri egwu dị ka ihe egwuregwu ụmụaka dị afọ niile ka mmadụ niile wee rite uru na nku ume iku ume oge niile iji bulie ike nku ume site na ịfụ bọl ahụ ka ọ nwee ike na-enyocha ikuku na ikuku. The ụzọ abịa na dị iche iche modulu, mgbanwe na-agbanwe. Ihe eji eme magnetik emeputara na iku ume iku ume nke na-enye ndozi ka onodu onodu iku ume mmadu.
Setịpụsị Ngwá Ụlọ
Tọọzdee 18 Febrụwarị 2021
Setịpụsị Ngwá Ụlọ ChuangHua Tracery dabara adaba maka ụlọ dị mma, ohere azụmahịa, ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ma ọ bụ whichlọ ihe nkiri nke ChuangHua, ihe nlele windo nke China. Iji mpempe akwụkwọ e ji akpụ ọla na ụcha ihe na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha uhie uhie na -ewuchapụta nke ọma na-acha ọcha nke na-eme ka ihe nkiri ya dị mma, na-eme ka ha nwere onwe ha pụọ na ihe oyiyi siri ike, nke oyi na nke dị arọ. Dịka mma na-adị ọcha ma dị mma n'ụdị nhazi ya, mgbe ọkụ gafere n'usoro laser laser, onyinyo ahụ gafere na mgbidi na ala nke gbara ya gburugburu na-egosi ọmarịcha mma.
Ihe Ụmụaka Ji Egwuri Egwu
Wenezdee 17 Febrụwarị 2021
Ihe Ụmụaka Ji Egwuri Egwu Inyere ụmụaka aka ịghọta ebumnuche mmepe nke ndụ n’elu ala, nchekwa, nchekwa na mweghachi nke oke ọhịa. Osisi ụdị y osisi osisi acacia na osisi acacia, osisi chening, Tochigi, Taiwan fir, osisi camphor na Asia fir. Textdị osisi na-ekpo ọkụ, ụdị pụrụ iche nke ụdị osisi ọ bụla, yana elu ala maka ụdị osisi dị iche iche. Akwụkwọ akụkọ ihe atụ na-enyere aka zie ụmụ mkpọrọ gbanyere mkpọrọgwụ site na echiche nke ịchekwa oke ọhịa, ịmata ọdịiche dị n'etiti ụdị osisi Taiwan, na-ewetara echiche banyere oke ọhịa na akwụkwọ foto.
Tiuzdee 16 Febrụwarị 2021
Oche Oche N'ime afọ 60s, ndị na-emepụta ọhụụ mepụtara arịa ụlọ plastik mbụ. Ekike nke ndị mmebe ya na ịba uru nke ihe ahụ butere ya nnweta. Ma ndị na-ese ya na ndị na-azụ ahịa riri ya ahụ. Taa, anyị maara ihe ize ndụ ya na gburugburu ebe obibi. Ma, ebe a na-ere nri juru eju na oche plastik. Nke a bụ n'ihi na ahịa adịghị enye obere nhọrọ ọzọ. Designwa imewe ahụ na-ebizi karịa na ndị na-eji ọla rụọ ụlọ, ọbụlagodi mgbe ụfọdụ ibipụta akwụkwọ site na ngwụsị narị afọ nke 19… Ebe a ka amụrụ Tomeo: oche oche ọgbara ọhụrụ, ọkụ na nke nwere ike ndọkwa.
inci Seramiiki Satọdee 27 Febrụwarị
Prisma Onye Na-Ahụ Maka Ntụpọ Ultrasonic Nwere Ntụpọ Fraịdee 26 Febrụwarị
Baan Igbe Nri Abalị Tọọzdee 25 Febrụwarị
Ihe Eji Eme Ụlọ Oriri Oche Achara Tozuru Oke Egwuregwu Iku Ume Setịpụsị Ngwá Ụlọ Ihe Ụmụaka Ji Egwuri Egwu Oche Oche